[Politika ] 28 Janoary, 2009 14:47
[Ankapobeny ] 28 Janoary, 2009 05:03
Vita ny Valifatinareo sy lafrantsa
"V" mairiky ny fandresen'ny devoly no hita miseho lany ankehitriny ary mipotra tsikelikely ny contrat vita t@ ireo fanetribe ny firenena. "V" voafitakareo ny vahoaka resy mora rebirebena noho ny fahatrana ary mbola hahantra lavitra noho izao satria aman'hetsiny ireo olona very asa tsy fidiny noho ny hetraketraka nokobonin'ireo DEVOLY BE isakarazany.
Vita ity ny valifaty ho an'ireo rehetra mpitondra voaongana t@ fotoanandrony. Vita ihany koa ny valifatin'ireo rehetra voailika tao aorinan'ny 2002 izay niaraka nandrodana ihany koa t@ fotaonany. Vita ihany koa ny valifatin'ilay bandy kely voalaza voan'ny atsojay sy ny sisa ary nanaiky ny hiaraka hamita ilay asan-devoly mamotika firenena @ dorotrano fanimbana fananan'olona sy ny asan'olona. Rhefa ny vola tokoa no mibaiko tsy misy afaka miazona ny eritreritra sy ny hetaheta rehetra tsy mijery ireto vahoaka ho fitahana. Ary farany Vita koa ny valifatintsika vahoaka milaza mijaly sy mahatra kanefa mialona sy be otripo.
Vita iny ny anjaran'i ra8 rava ny fanjakana potika ny fananany ary mafy ny sedra nolalovany ankehitriny. Notsaraintsika vahoaka izy io ka samy tompon'andraikitra isika rehetra.
Hoy ny ben'ny tanana jiolamboto omaly nanao oe "pas iray sisa dia vita ny tolona" nanaiky azy koa io ny tafika ary ohatra voafehy ho azy ireo mpandroba. Azo antoka fa ny "pas iray" izay dia ny haka ilay fahefana tetezamita androany etsy @ 13mai. Azonareo izany ny fahefana ka mahaleova mahalasana miravoa sy mifaly fa tonga ilay tanjona nirinareo h@ ela dia ampiriato @ izay ny vahoaka hanaiky ny sitraponareo.
Mibaribary ankehitriny ilay olona faha3 nialoka tao ambadik'ilay ambodia nitafy hodin-janak'ondry. Te hampanjaka ny asan'ny maizina eto Madagasikara. Ho lany @ filokana sy ny fahavetavetana isakarazany ny volam-panjakana. Tsy mahagaga rahateo fa tanana mioson-dra no nakana izany fahefana izany. Mazana mantsy ny devoly rehefa manao pacte aminy enao dia mila sorona hatrany izy.
Tsy hangina kosa anefa ireo maro mivavaka andro aman'alina mivavaka @ hoavin'ity firenena ity. Ary tsy maintsy hivaly ny vavaka ao aorina ao. Andriamanitra no miasa ary tsy hanadino izy rehfa mitodika sy miverina aminy isika VAHOAKA. Mahereza fa tia ny Malagasy Andriamanitra efa nandalo teto izany fandorana baiboly izany kanefa tsy levona izy. Mandalo izao ny sedra maro isakarazany ka atsoy izy fa tsy maintsy hiaino izy rehefa ny fo madio no miantso azy am-pibebahana.